သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ဧည့်သည်
အော်.. ဘာလိုလိုနဲ့ လန်ဒန်ရောက်လာတာ တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီ။ ကျောင်းသားဗီဇာနဲ့လာရတာဆိုတော့လဲ တစ်နှစ်နှင့်နှစ်လဘဲ နေထိုင်ခွင့်ရတယ်။ လာမဲ့ ၂၈ (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈) ရက်ဆိုရင် ဗီဇာသက်တမ်းက ကုန်ဆုံးတော့မယ်။ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ပညာရေးအတွက် ဗီဇာတိုးဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ်။ နေထိုင်ခွင့်လေးရဖို့ ဗီဇာကြေးကတော့ နင့်နေတာဘဲ။ ပေါင် လေးငါးရာ ထွက်ဦးမယ်။
တက္ကသိုလ်မတက်ရသေးပေမဲ့ အပြင်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေတက်ရတာနဲ့တင် ပေါင် ထောင်ကျော် လျောသွားပြီ။ တက္ကသိုလ်တက်ရင်လဲ ပေါင် တစ်သောင်းခွဲလောက်ထပ်ကုန်ဦးမယ်တဲ့။
သူတို့နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစရိတ်က တစ္ဆေသရဲထက် ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ တစ္ဆေသရဲခြောက်ရင် ရတတ်ရာရာ သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတို့ ဣတိပိသော ဘဂ၀ါတို့ ရွတ်ဖတ်လို့ရသေးတယ်။ အခုဟာက ဘုရားစာတွေ တသွင်သွင်ရွတ်ဖတ်ရင်လဲ ကုန်တာကတော့ ကုန်မှာဘဲလေ။
ပိုက်ဆံတွေသိန်းရာချီအသုံးပြုပြီးမှ ဘွဲ့ ဒီဂရီတပ်ခွင့်ရမဲ့ပညာရေးကလဲ ရွှေထက်ကိုပိုပြီးတန်ဖိုးရှိနေတယ်။
ဟုတ်မှာပါလေ ပညာရွှေအိုး လူမခိုးလို့ ဆိုးရိုးစကားက ရှိထားပြီးသားမဟုတ်လား။ လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးမှတော့ နောက်ဆုပ်လို့လဲ မရတော့ဘူး။ တုံးတိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် ဒီဂရီတစ်ခုခုရအောင်တော့ ကြိုးစားရမှာဘဲ။
လိုချင်တဲ့ ပညာရေးရရှိပြီးရင်တော့ ဧည့်သည်တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အစာဝရင် ဌာနကို ပြန်ကြရစမြဲဘဲမဟုတ်လား။
အမိဌာနေ မြန်မာပြည်ကိုလဲ လွမ်းလှပါပြီ။ လန်ဒန်မှာလဲ အရမ်းပျော်လှတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ လိုအပ်ချက်တွေပြည့်ရင်တော့ ပြန်ရမှာပါ။ ကျနော်တို့က ဧည့်သည်တွေဘဲတွေလေ။
မြန်မာကနေပြီး လန်ဒန်ကို လာရတဲ့ ဧည့်သည်တစ်ယောက်အတွက် လန်ဒန်မှာနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာလိုအပ်သလို
လူ့ဘ၀ကို အလည်လာကြတဲ့ ကျနော်အပါအ၀င် ဧည့်သည်အားလုံးဟာလဲ လူ့ဘ၀မှာ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာယူကြရမှာ မဟုတ်လား။ ဗီဇာကုန်တဲ့ တစ်နေ့ရောက်ရင်တော့ မူရင်းဌာနကိုဘဲ ပြန်ကြရမှာ အသေအချာပါဘဲ။
ဧည့်သည်အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ ကံဆိုးရှာတဲ့ ဧည့်သည်ကလေးတစ်ယောက်အကြောင်းသွားသတိရမိတယ်။
ဒီနေ့မှ Yahoo သတင်းထဲက ဖတ်လိုက်ရတာပါ။ တကယ့်သနားစရာဧည့်သည်လေးပါ။ လူ့ဘ၀မှာ ဗီဇာ အကြာကြီးရမသွားရှာဘူး။ ဒါကြောင့် စောစောစီးစီးဘဲ သူ့ဌာနေကို ပြန်သွားရရှာတယ်။
လူ့ဘ၀မှာနေထိုင်ဖို့ လေးနှစ်ဘဲ ဗီဇာရသွားတယ်။ သူက အမျိုးသမီးလေးပါ။ နာမည်က ကယ်လေအိရှီး (Kayley Ishii)တဲ့။ အသက်က ၄ နှစ်ဘဲရှိသေးတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကပါ။
သူမက နဲနဲတော့ အဆော့မက်ပုံရတယ်။ ကြံကြံဖန်ဖန် အ၀တ်လျော်စက်ထဲကို ၀င်ပြီးဆော့တယ်။ သူမ အ၀တ်လျော်စက်ထဲရောက်နေတဲ့အခါ သူမအနီးအပြင်ဘက်မှာက သူမရဲ့ မောင်လေးရှိတယ်။ အသက် ၁၅ လသားအရွယ် လမ်းလျောက်တတ်ခါစလေးပေါ့။
အကျိုးအကြောင်းဘယ်သိတတ်ပါဦးမလဲ။ သူ့အမ အ၀တ်လျော်စက်ထဲ ရောက်နေတဲ့အခါမှာဘဲ အ၀တ်လျော်စက်ပါဝါခလုပ်လေးကို နှိပ်ပြီးဆော့ကစားလိုက်တယ်။ အ၀တ်လျော်စက်ကလဲ သက်ရှိမဟုတ်လေတော့ သူ့တာဝန်အတိုင်း လုပ်ငန်းကို စတင်တော့တာပေါ့လေ။
ကယ်လေအီရှီးလေးဟာ အ၀တ်လျော်စက်ထဲမှာ တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ရေတွေရွှဲရွှဲစိုလို့။ လူကလဲ ဘောလုံးထဲမှာနေပြီး အကန်ခံရသလို စက်လည်ပတ်တဲ့နောက် ပါသွားတာပေါ့။
နှစ်မိနစ်လောက်ကြာမှ သူမရဲ့ အမေ ရောက်လာပြီး အ၀တ်လျော်စက်ကို ပိတ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်နောက်ကျသွားပါပြီ။ သူမလုံးဝသတိလစ်နေပါပြီ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ဘာတစ်ခုမှ မရှိပေမဲ့ ကလေးအရွယ်ဆိုတော့ ရှော့ခ်ဖြစ်ပြီး သတိလစ်သွားတယ်။
ဆေးရုံကို အမြန်ယူဆောင်ကုသပေမဲ့လဲ ကယ်လေအီရှီးလေးကတော့ လူ့လောကကြီးကို ထာဝရနှုတ်ဆက်သွားရှာပြီလေ။
အော်... ဧည့်သည်... ဧည့်သည်
အားလုံးဧည့်တွေတွေချည်းပါဘဲလား။ အသက်ကြီးတယ် ငယ်တယ် သန်မာတယ် ပျော့ညံ့တယ် ဆင်းရဲတယ် ချမ်းသာတယ် ရုပ်လှတယ် ရုပ်ဆိုးတယ်စတဲ့ ခွဲခြားမှုတွေ ရှိနေကြပေမဲ့ အားလုံး (အားလုံး) ဗီဇာကုန်ရင်တော့ လာလမ်းအတိုင်း ပြန်ကြရမှာဘဲ။ သံဝေဂပွါးများစရာကောင်းလိုက်တာ။
(၂)ဗီဇာသက်တမ်းတိုးဖို့ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ထုံးတွေကို လုပ်ဖြစ်ကြရဲ့ လား?
(၄)မူရင်းနေရာမှာ စားသောက်ဖို့ ဘယ်လောက်စုဆောင်းထားကြပြီးပြီလဲ?
(၅)အားလုံး Visit ဗီဇာကိုင်ဆောင်ထားကြတယ်ဆိုတာ မေ့သွားကြပြီလား?
အဲဒီတစ်နေ့ရောက်ရင်တော့ ကျနော်တို့တစ်တွေလဲ ကယ်လေအီရှီးလေးလို လာရာလမ်းအတိုင်း မလွဲမသွေ လျောက်လှမ်းကြရဦးမှာ လုံးဝ အသေအချာပါဘဲခင်များ။
http://uk.news.yahoo.com/5/20090204/twl-girl-dies-inside-washing-machine-3fd0ae9.html ကို အခြေပြုရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 16:41
Thursday,5February 2009 at 07:33:00 GMT